आईफोनमा रेकर्ड गरिएका भिडियोहरू आईप्याडमा iMovie मा कसरी हस्तान्तरण गर्ने आईफोन समाचार
देखि iMovie स्वतन्त्र भएको छ खरीद आईओएस with को साथ कुनै पनि उपकरण, यो धेरै सम्भावना हुन्छ कि तपाइँ यसलाई प्रयोग गर्न उत्सुक हुनुहुन्छ। सामान्यतया जब म हतारमा हुन्छु म प्रायः मेरो आईफोनमा भिडियोहरू सम्पादन गर्दछु, तर इमानदारीसाथ, यो सिफारिस गरिएको हुँदैन। यदि तपाईं नयाँ आईप्याड एयर वा आईप्याड मिनी रेटिना प्राप्त गर्न लाग्नुभएको छ (जब यो बिक्रीमा जान्छ) म तपाईंलाई यो प्रयास गर्न सल्लाह दिन्छु, यो एकदम सजिलो र सहज छ। ठूलो स्क्रिनमा पनि, हाम्रो घर भिडियोहरू सिर्जना गर्न यो धेरै सजिलो छ।
आईप्याड, उनीहरू भर्खरको संस्करणहरूमा क्यामेरा सुधार भएको छ, भिडियो रेकर्डिंगका लागि सबै भन्दा राम्रो आईडाइभिस छैन। आईफोन ss वा c सी / use प्रयोग गर्न उत्तम हुन्छ (ती अघिल्लो उपकरणहरू भन्दा उच्च रिजोलुसनमा रेकर्ड गर्दछन्)।
दुर्भाग्यवस, आईप्यान्डबाट सिधा आईपोजी आईपोजी आईपोजिममा फिल्महरू निर्यात गर्न कुनै साधारण आयात विकल्प छैन। यो पनि कुनै धेरै जटिल कार्य होईन। आईओएस With को साथ एप्पलले एप्पल उपकरणहरू बीच फाइलहरू साझेदारी गर्न सजिलो बनाएको छ।
हामी आयात दुई अपेक्षाकृत सरल तरिकामा गर्न सक्दछौं:
परम्परागत तरिका। एकचोटि तपाईंले आईफोनबाट तपाईंको म्याक वा पीसीमा भिडियोहरू डाउनलोड गरिसकेपछि, तपाईंले तिनीहरूलाई आईट्यून्स मार्फत मात्र सि only्क्रोनाइज गर्नुपर्दछ ताकि ती आईप्याडमा लोड भए।
एयरड्रोप प्रयोग गर्दै। आईओएस to लाई धन्यबाद, एयरड्रोपको साथ हामी वायरलेस भएर दुईवटा ट्यापहरूको साथ आईफोन र आईप्याडको बीचमा भिडियो क्लिपहरू ट्रान्सफर गर्न सक्दछौं। छोटो भिडियोको लागि, त्यहाँ कुनै समस्या छैन। तर यदि तपाईं धेरै लामो फाईलहरू ट्रान्सफर गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने उत्तम र सब भन्दा चाँडो चीज पारम्परिक तरिकाले अगाडि बढ्नु हो।
एकचोटि तपाईंले आईफोनबाट आईप्याडमा फिल्महरू हस्तान्तरण गर्नुभयो, हामी अब आफ्नै घर चलचित्रहरू बनाउन सक्छौं।
हाम्रो आईफोनमा रेकर्ड भिडियो क्लिपहरू आयात गर्न र सक्षम हुन यो चरण आधारभूत छ हाम्रो आईप्याडको iMovie अनुप्रयोगमा तिनीहरूलाई प्रक्रिया गर्नुहोस्। यो राम्रो हुनेछ यदि भविष्यका संस्करणहरूमा उनीहरूले अनुप्रयोग भित्र प्रत्यक्ष आयात विधि सिर्जना गरे, तर अबका लागि हामीले चरणहरू भनेको मैले संकेत गरेको छु।
अर्को केही दिनमा, हामी एक तैयार गर्नेछौं आईप्याडका लागि आईमोभीको पूर्ण समीक्षा। रहनुहोस् !!
थप जानकारी - एप्पल iOS का लागि iPhoto, iMovie र Garageband अपडेट गर्नुहोस्
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईओएस » iOS7» आईफोनमा रेकर्ड गरिएका भिडियोहरू आईप्याडमा आईमोभीमा कसरी हस्तान्तरण गर्ने
भयानक वस्तु। आईक्लाउड के हो?…।
पाठ्यक्रम होइन भिडियो ट्रान्सफर गर्न। आईक्लाउडले तपाईंको फोटोहरूमा लिने फोटोहरू अपलोड गर्दछ, तर भिडियोहरूमा यस्तो हुँदैन।
आलोचना गर्न कत्ति सजिलो छ ...
यदि तपाइँ मा तपाइँको उपकरण प्रविष्ट गर्नुहोस्
आईक्लाउड सेक्सन, तपाईंले फोटो विकल्प देख्नुहुनेछ, फोटो र भिडियोहरू होइन। भित्र निर्दिष्ट
Streaming स्ट्रिमिंगमा मेरा फोटोहरू new नयाँ फोटोहरू अपलोड गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई स्वचालित रूपमा पठाउनुहोस्… ..
यो भिडियो को बारे मा कुरा गर्दैन। यदि तपाईंसँग आईफोन छ भने तपाईंले त्यो भिडियोहरू थाहा पाउनुपर्दछ
ईन्ग्राभिंगहरू, छोटो पनि, धेरै ठाउँ लिन्छन् जसले यसलाई असम्भव बनाउँदछ
तिनीहरूलाई क्लाउडमा पठाउनुहोस्।
यदि तपाईं आईक्लोडबाट आईमोभीमा भिडियो ट्रान्सफर गर्न चाहानुहुन्छ भने यो कसरी भयो?
हेय लाई जवाफ दिनुहोस्
अब हो, सिरीले तपाईंको ईमेलहरू पढ्दछ